Ao anatin’ny fahamailoana tanteraka i Indonezia taorian’ny andiam-panapoahana baomba tany Java Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2018 8:46 GMT
Faravodilanitr'i Surabaya avy amin'ny mpisera Flickr Everyone Sinks Starco. CC By-Sa
Matahotra, misaritaka ary tezitra taorian'ny andian-kerisetra tao sy manodidina an'i Surabaya, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Indonezia ny vahoaka, ao anatin'izany ny fanaovana vivery ny ainy nanapoaka baomba tao amin'ny fiangonana kristiana miisa telo tamin'ny alahady 13 mey 2018, izay nahafaty olona 14 farafahakeliny ary nandratra olona am-polony.
Taoriana kelin'izany tamin'io andro io ihany, miala 30 kilaometatra avy eo amin'ny notantaraina etsy ambony, nanapoaka tsinahy ny baomba namboariny tao amin'ny trano ho an'ny olona sahirana ny lehilahy iray 47 taona, ka nahafaty ny vadin'ilay lehilahy sy ny vavimatoany ary nandratra ny zanany telo hafa. Maty voatifitry ny hery miady amin'ny fampihorohoroana ilay lehilahy teo am-panambatambarana vanja mipoaka maromaro.
Ary ny marainan'ny alatsinainy 14 mey, fianakaviana iray ahitana olona dimy no nanapoaka ny tenan-dry zareo tambony môtô teo amin'ny vavahady fisavana teo amin'ny foiben'ny polisy ao Surabaya, izay niteraka ny fahafatesan-dry zareo sy namparatra mafy polisy efatra sy sivily enina. Voa saingy tafavoaka velona ny iray amin'ireo zanaky ny nanapoaka ny tenany iray valo taona.
Ho setrin'ireo fanafihana ireo, nambara manerana ny firenena ny fahamailoana ambony indrindra.
Nilaza ho tompon'antoka tamin'ny fanapoahana baomba ny fiangonana tao Surabaya, izay renivohitry ny faritanin'i Java Atsinanana, ny ISIS. Ireto avy ireo fiangonana voatafika: ny Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, fiangonana presbyteriana (mitovy amin'ny FJKM eto Madagasikara); ny Gereja Pantekosta Pusat (GPP) Surabaya, fiangonana pentekotista; ary ny Gereja Santa Maria Tak Bercela (Masina Maria Tsy Kasihin'Ota), eglizy katolika romana.
Notondroin'ny polisy indoneziana fa i Dita Oepriarto, manan-janaka efatra, no nikotrika ireo fanafihana ireo. Notononina koa izy ho lehiben'ny vondrona Jemaah Ansharut Daulah (JAD) ao Surabaya, vondrona nanolotra ny fankatoavany ho an'ny mpitarika ny ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi sady vondrona notondroin'ny governemantan'i Etazonia ho fikambanana mpampihorohoro.
Andro vitsivitsy lasa izay, niezaka ny hifehy ny rotaka am-ponja tao Depok, tanàndehibe iray ao Java Andrefana, nahavoarohirohy gadra an-jatony izay avy amin'ny JAD ny ankamaroan'izy ireo ny polisy ndoneziana. Avy eo moa nafindra tany amin'ny fonja tsara aro indrindra tany Nusa Kambangan ny mpitarika izany rotaka izany.
Mihevitra ny polisy fa izao fanapoahana baomba ao Surabaya izao dia mety ho valifaty avy amin'ny JAD ho setrin'ny fahalazoan'ny ISIS eto amin'izao tontolo izao sy ho setrin'ny fitomboan'isan'ireo mpitarika ao aminy nosamborina.
‘Aoka tsy hisy fankahalana na herisetra ao am-pon'ny vahoaka’
Mponin'i Surabaya an-jatony no nanatona ny Vokovoka Menan'i Indonezia hanome ra ho an'ireo lasibatry ny baomba. Ary niely fatratra ny teny fankaherezana hoan'ireo niharam-boinan'ny herisetra.
Fiaraha-miory lalina hoan'ireo tao am-piangonan'i Surabaya voadaroka baomba. Tsy fantatro izay tena nitranga fa manantena aho fa ho avotra ny rehetra.
Malahelo aho amin'izao famoizana ny tiana izao ary miara-ory amin'ny fianakavian'ireo voadaroka baomba ao Surabaya – fihetsika tsy misy fo sy kanosa, natao hahatonga antsika ho tsara kokoa ny fivavahana fa tsy natao hanapotika
Nanome ny fiaraha-mioriny amin'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy ny fikambanana miozolomana roa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ny Nahdlatul Ulama sy ny Muhamadiyah, ary nanameloka ny fanafihana.
Ary namoaka filazana an-gazety ny Fiombonan'ny Fiangonana Indoneziana (PGI) miangavy ny fiangonana sy fikambanana tsirairay avy hatoky tanteraka ny fanjakana hanatontosa ny andraikiny. Niantso ny fiangonana sy ny vahoaka ihany koa izy hanapoka ny fandisoam-baovao ary tsy “hiady amin'ny herisetra amin'ny alalan'ny herisetra”. Nolazain'ny Papa Fransoà ihany koa ny filàna “fampihavanana sy firahalahiana” taorian'ny fanafihana:
Nilaza ny papa: “Ho an'i Indonezia sy ny Kristiana ao Surabaya, nangataka tamin'ny Tompon'ny Fandriampahalemana izahay hampitsahatra izao herisetra izao, enga anie tsy hisy fankalahalana na herisetra ao am-pon'ny vahoaka fa hisy fampihavanana sy firahalahiana (kosa). #MiarakaManohitraMpampihorohoro
Niantso fitoniana ny filoha Joko Widodo, izay nisidina ho any Surabaya ora vitsivitsy taorian'izao toe-javatra mampivarahontsana izay ary nangataka ny fahamailoan'ny firenena sy ny firaisankina manoloana ny fampihorohoroana.
Nanome ako izao antso firaisankina izao ny Indoneziana sasany tao amin'ny media sosialy:
Alohan'ny maha-miozolomana, kristiana, bodista na haindò, aleo aloha isika ho OLOMBELONA. Ho izany ve isika? Tonga eto amin'izao tontolo izao isika ho rahalahy sy rahavavy, koa andao hifandray tanana, tsy misy aloha sy aoriana. Fiarahamiory lalina indrindra hoan'ireo niharam-boinan'ny fanapoahana baomba tao Surabaya.
Afa-misoroka ny fanafihana ve ny lalàna matanjaka?
Indonezia no firenena misy vahoaka miozolomana maro isa indrindra eto ambonin'ny tany, ary tony fihetsika ny ankamaroan'izy ireo. Na izany aza, misy ny fanahiana lalina amin'ny fitomboan'ny tara-kevitr'ireo vondrona sasantsasany ao amin'ny firenena sy ivelany izay mampiroborobo amin'ny fomba maherivaika sy hatramin'ny fomba fandikàna maherisetra aza ny fivavahana.
Fanisana vao haingana momba ny tsifileferana eo amin'ny mpianatra notarihan'ny Orina Mpanasoa Wahid, foibe iray ao Jakarta fanomezana vahana ny fikarohana sy ny sosialy, ary manohana Islam maro(hevitra) sy milamina, no nahitana fa ny 60% amin'ireo 1626 nanontaniana manerana ny firenena no nilaza fa vonona ry zareo handeha any amin'ny faritra misy ady raha manam-bintana ho amin'izany, ary ny 68% no afa-mihevitra fa handray anjara amin'ny ady masina amin'ny hoavy.
Notaterina fa i Dita Oepriarto ilay nolazaina ho tompon'antoka tamin'ny fanapoahana baomba ireo fiangonana telo, dia nampiasa ny vadiny sy ny zanany efatra (zatovo mirahalahy sy tanora mirahavavy) amin'ny fanatontosana ny fanafihana. Nilaza ny lehiben'ny polisy nasionaly Tito Karnavian fa anisan'ireo fianakaviana maro niverina avy niady hoan'ny ISIS tany Syria, io fianakaviana io.
Milaza ny sasany fa miteraka olana ny lalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana misy amin'izao fotoana ao Indonezia satria tsy mamela ny polisy hisambotra iray ahiahiana izy io raha tsy hoe efa antomotra dia antomotra ny loza na efa mandeha ny fanafihana. Tsy nampiditra tao anatiny ihany koa ny fomba mifanaraka amin'ny lalàna ny “fanesorana ny hiringiriny” amin'ireo niverina avy any Syria. nanamafy ny tokony handaniana lalàna vaovao i Mohammad Guntur Romli, mpanao gazety iray lasa politisiana:
“Maintimolaly” syriana ny fianakaviana nidaroka baomba ireo fiangonana tany Surabaya. Amin'ny lalàna misy amin'izao fotoana izao, tsy azo ampangaina ireo nanatevin-daharana ny ISIS. Tao amin'ny JAD ry zareo, noho izany tsy voapaingotra. Rehefa manamboatra baomba sy manafika ihany ry zareo no azo anjehina. Mila fepetran-dalàna eo amin'ny toerana iadiana amin'ny fampihorohoroana avy amin'ny governemanta isika.
Mivezivezy malalaka tsy miatrika famonjàna sy fomba “fanesorana ny hiringiriny ao aminy” ireo maintimolalin'ny ISIS miisa 500 avy any Syria sy Iràka. Nahomby tamin'ny fanapoahana toerana telo ny fianakaviana iray. Tany misy hotakotaka mitaky fandaniana fepetran-dalàna eo amin'ny toerana iadiana amin'ny fampihorohoroana izany.